Akhriso: 10 Waxyaabood oo laga bartay khudbadii Farmaajo iyo shirka London? - Hablaha Media Network
Akhriso: 10 Waxyaabood oo laga bartay khudbadii Farmaajo iyo shirka London?
HMN:- Waxaa maanta Magaalada london ee dalka Ingiriiska si rasmi ah uga furmay shirkii looga hadlayey arrimaha Soomaaliya oo ay soo abaabushay dowladda Ingiriiska iyo Maraykanka.
Waxaa furitaankii khudbad xasaasi aheyd ka jeediyey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo beesha caalamka horteeda ka ballan qaaday inuu Soomaaliya gaarsiin doono horumar haddii la saacido.
Haddaba waxaa jiro 10 waxyaabood oo laga bartay Madaxwayne Farmaajo ee shirka London.
1) Inuu Shirka London ka ahmiyad badan yahay wajigii koowaad ee uu ka qeyb galay Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud, ayna jiraan ififaalo fiican marka aad akhriso ama dhageysato khudbadda Farmaajo
2) Inuu Farmaajo xakameeyey awoodii Madaxda Maamul Goboleedyada, isla markaasna uu isaga ku hadlayey afka dowladda dhexe iyo Maamul Goboleedyada, wuxuuna sameeyey arrin uu awoodi waayey Xasan Shiikh intii uu socday Wajigii koowaad ee shirka London oo dhacay xilligii dowladdii hore.
3) in Madaxweyne Farmaajo ay ka go’an tahay inuu guul gaarsiiyo Soomaaliya.
4) Inay jirto rajo fiican oo laga qabo dhisidda ciidamo Soomaaliyeed oo awood leh, lagana maarmi doono howlgalka midowga Africa ee AMISOM.
5) Inuu Madaxweyne Farmaajo xoogga saarayo sidii cuna qabateynta hubka looga qaadi lahaa Soomaaliya si uu dagaalka Al­Shabaab ugu soo iibsado hubka casri ah, Taangiyo iyo diyaarado.
6) Inuu Farmaajo rajo fiican ka qabo inay Beesha Caalamka si weyn u garab istaagi doonto Soomaaliya, maadaama uu ka codsaday inay aaminaan kuna kaloonaadaa, Soomaaliyana aysan dib dambe ugu laaban doonin dagaalo sokeeyo iyo dhibaatooyin.
7) Inuu ku canaantay dowladaha Ingiriiska iyo Mareekanka sidii aysan mardambe xayiraad u saarin lacagaha xaawadalaha Soomaaliyeed ee dhowr jeer la hakiyey.
8) In wax kasta oo beesha Caalamka u qabaneyso Soomaaliya lasoo marsiiyo dowladda dhexe, maadaama uu khudbadiisa ku sheegay inay Maamul Goboleedyada dalka hoos yimaadaana dowladda dhexe isla markaasna ay iyadada wax kasta u qeybin doonto.
9) Inuu Farmaajo doonayo sidii uu kalsooni fiican uga heli lahaa Beesha Caalamka, maadaama uu khudbadiisa ku sheegay inuu yahay shaqsi ay Soomaaliya aad ugu kalsoon yihiin lagana sugayo waxqabad.
10) In dhamaadka shirkaan ay kasoo bixi doonaan waxyaabo badan oo Soomaaliya anfici doono, isagoo inta badan khudbadiisa kusoo celcelinayey in lagala shaqeeyo sidii ay Soomaaliya dhaqaale uga soo saaran laheyd wadankeeda oo ilaahey Kheyraad ugu hibeeyey.